I-Semalt Insight: SEO I-Pour Le Marqueur Yuropian N'est Pas Tout Sur Les Langues
I-SEO i-strategy ye-rentable eyanceda ukuba i-marketeurs ibe ne-engagement boosté ne-users yabo. Abadlali be-digital digital banenkinga ngokuzama ukufumana i-Européens kwi-SEO. Le ngxaki yinto yokuba yilona ulwimi. Dlulisa i-reussir ukuze ulungise i-web site yakho ye-Europe kunye neentengiso ze-European clients, wena ufune ukufumana ezinye iinkathazo ezingaphezulu kweelwimi.
U-Oliver King, umphathi we-réussite client iSemalt , kuchaza ukuba le micimbi ifanelana nawe xa ukhetha ukunyaniseka xa uhamba ngokuthengisa in Europe - cargo bicycles for sale in us.
Iingqungquthela ukuba amazwe aseYurophu afumane i-cinquantaine yokuhlawula. Umlingisi wokulungisa i-cinquantaine de langues ukuze ube ne-campagne SEO isebenze wena fera perdre okanye milieu. I-European Union inama-23 angama-langues, asemthethweni afumaneka ukuba asetyenziswe njengama-langues officielles par Union. Njengoko u-marketeur, uyaqonda ukuba iYurophu iyinarha eneenkalo ezininzi.
I-bon bonisi i-pays ye-Netherlands, uhlawula obala i-17 yezigidi zabantu. I-Pays-Bas isebenzisa ii-langues officielles, le frison ne-néerlandais. Dlulisa umtya kwi-SEO, ufumane un long length of avance phezu zakho izivumelwano. Uyazi ukuba ulungise iWebhsayithi yakho kwiintetho zonke ezifumaneka kwi-intanethi kwi-referencement..You neavez pas to take into account zonke iilwimi ezifumaneka kwiYurophu ukuthungatha. Yenza i-content frais kunye neyokuqala kubaxhasi bakho abanokubakho, unikeze iimveliso ezahlukeneyo kwiimfuno zakho kunye nawe ubeke phambili malunga nabo ukusuka.
Iiphasile ukuya kwi-selected reelle. Ngaphandle koko, ucinga ukuba ulungele inkcubeko yendawo yakho. Ngegama leenkcubeko, wena ucinga ukuba iindlela ezihlukeneyo zihamba njani ngendlela abantu abacinga ngayo. Abaxhasi baseYurophu banesimo seendlela zokuphila ezahlukeneyo. I-select chose ifapp xa ithetha malunga neendlela abazenzayo kwiiWebhsayithi kunye nee-plateformes de médias sociaux. Izigidi ezilishumi zabantu abahlala e-Pays-Bas zingaba zi-intanethi kwi-intanethi kunye neenkcukacha ezahlukeneyo kunye neenkqubo ezahlukeneyo. Abaxhasi beVos bayamangalisa kwaye baneendlela ezahlukeneyo zokwenza izinto. Cinga i-URL xa ufumana i-Web page yakho.
Ikhefu lihlawula i-Europe ibe nesizwe esahlukileyo. Le nkcubeko kunye neelwimi zimbini iinkalo ezahlukeneyo ozenzayo xa ulungiselela ukusetyenziswa kwewebhu kuwebhusayithi. You have not been looking for the nations that have languages ​​that chevauchent and target the publics in a web site. Inani elithile lokuhlawula i-usetyenziso lingasebenzisa i-langue, kodwa bahlala benendlela eyahlukileyo yokukhetha.
Yiyo uluhlu lweziphakamiso eziza kukunceda ekujoliseni uwonkewonke ngendlela enokusebenza ngayo:
Comprendre le histoire de sakho isisombululo sikawonkewonke
Yenza i-un search engqinelanayo malunga nalezi zimiko ezibandakanyekayo
Uhambo oluhambahambayo kunye ne-Européens pour le savoir connaisse
Nceda usebenze kunye nomntu onokuzikhethela xa uphuhliso lwe-content
Ukuqonda okucacileyo ukuba uluhlu lwakho loluntu lufuna ukuba uvumelekile ukuba unelungelo lokuxhaswa nge-digital numérique. I-Atteindre yeziphumo ezithandekayo zityhala i-campagne de reférencement yinto ebalulekileyo. Dlulisa i-intanethi i-Européens kunye ne-ils bafuna le plus, pensez à passer du temps avec eux et à travailler avec un locutur native. IYurophu iyimveliso enkulu. Uyazi ukuba uyahamba.